Dielectric Coating ho an'ny mpividy tranokala China Manufacturer
Description:Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpifindra monina ho an'ny solosaina,Fikirakirana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ordinatera,Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpifindra monina ho an'ny mpampiantrano
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kifehy ho an&#39;ny mpampiantrano lehibe mpampiantrano > Dielectric Coating ho an&#39;ny mpividy tranokala
Ny informatika mahamaina amin'ny ranon-tsakafo dia fantatra amin'ny hoe ny rafitra mahametimety indrindra - mieritreritra ny fandehanana tsara
70F ny toetr'andro raha ampitahaina amin'ny rano mafana amin'ny rano 70F. Nahoana ny rano no mafana kokoa? Satria ny rano
Manala anao avo 24 heny kokoa noho ny rivotra.
Ny fluoridin'ny rivotra dia tsy mampirehitra ary tsy misy fipoahana , ary koa izany
manana dielectric avo. Afaka manadio ny famokarana hafanana amin'ny mpampiantrano lehibe.
Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoana fivoahan'ny hafanana hafanana hafanana.
* Kofehy ho an'ny mpampiantrano lehibe mpampiantrano dia Tsy manana enti-mampidi-doza, tsy mivoatra ary tsy misy fipoahana, tsy misy afo sy ny teboka Fluorocarbon Refrigerant;
* Fitaovana mifandraika amin'ny tontolo iainana, manana ODP lanjan'ny 0 sy ambany ambany GWP ambany
Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpifindra monina ho an'ny solosaina Fikirakirana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ordinatera Fikirakirana Dielectric ho an'ny mpifindra monina ho an'ny mpampiantrano